Knowledge – Page2– Ubuntu MM
07/05/2019 07/05/2019 kokoye2007 
အီတလီ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Microsoft Office Suite ရုံးသုံးဆော့ဝဲများအစား ပွင့်လင်းရင်းမြစ် ရုံးသုံးဆော့ဝဲများ ကို အစားထိုးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် စီးပွားဖြစ် ဆော့ဝဲများသို့ လိုင်စင်အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရခြင်းမှ ကင်းဝေးစေသည်။ အီတလီ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနတွင် LibreOffice ကိုအသုံးပြုရန် သတ်မှတ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ရေး စီမံချက်အတွက် LibreItelia Association နှင့် သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ၎င်း အဖွဲ့အစည်းမှာ အကျိုးအမြတ် ရယူရန် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမဟုတ်ပဲ LibreOffice ကို အများပြည်သူ အသုံးပြုနိုင်စေရန် မိတ်ဆက်‌ ထောက်ပံ့ပေးနေသော Non Profit Organization ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း အဖွဲ့အစည်းမှ LibreDifesa ဟုအမည်‌ပေးထားသည့် Project အနေဖြင့် အီတလီ […]
Tagged foss, Italian, LibreDifesa, LibreItelia, LibreOffice, OSS	Discover
Knowledge LoCo News ubuntumm
06/04/2019 10/04/2019 kokoye2007 
Ubuntu-MM Member Application Form
ubuntu-mm member and subscriber form is open now. Ubuntu-MM Subscriber is FREE for ALL Ubuntu-MM Subscriber Free Email Subscription Ubuntu-MM Brown Member Member Card 12000 Kyat Per Year Ubuntu-MM Gold Member Gold Member Card DVD + Sticker Door to Door Delivery 20000 Kyat Per Year Ubuntu-MM Diamond Member Diamond Member Card DVD + Sticker Ubuntu-MM […]
Tagged DVD, member, membership, sticker, subscriber, tshirt, ubuntu, ubuntu-mm, ubuntumm	Discover
Event Knowledge News Ubuntu
24/09/2018 kokoye2007 
Ubuntu လို့ခေါ်တဲ့ Linux Distro (Linux Kernel ကိုသုံးသည့် GNU/Linux မူကွဲတမျိုး) ဟာ (၂၅ ပတ်) ၆ လတိုင်း Release လုပ်ပါတယ်။ ၄ လပိုင်းနဲ့ ၁၀ လပိုင်းတွေဖြစ်ပြီး Version ကို ရှေ့ကထုတ်ဝေတဲ့ ခုနှစ်နဲ့ နောက်က လကို ထားပါတယ်။ YY.MM 16.04, 16.10 / 18.04,18.10 မကြာခင် Ubuntu 18.10 ထွက်လာတော့မယ်။ နာမည်ကိုတော့ AA BB CC ဆိုတာမျိုးလေး ပေးပါတယ်။ အရှေ့က Nick , အနောက်က သတ္တဝါလေးတွေ အမျိုးအစား ထားလေ့ရှိပါတယ်။ 18.10 ရဲ့ နာမည်က Cosmic Cuttlefish ဖြစ်ပါတယ်။ […]
Tagged 18.10, Cosmic Cuttlefish, gnome, Gnome 3.30, Kernel, Kernel 5.0, Linux, ubuntu	Discover
Featured Knowledge News
18/04/2018 25/09/2018 pixie
GNOME 3.28 ဟာ update အကြီးစားတစ်ခုအနေနဲ့ ထွက်ရှိခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၇၊ စက်တင်ဘာ မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ GNOME 3.26 ထက်စာရင်တော့ ရင်ခုန်စရာ အမြင်အပြောင်းအလဲတွေ သိပ်များများစားစားမပါသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နောက် ၆ လအတွင်း ဘာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ ဘယ်features အသစ်တွေရရှိလာမလည်းဆိုတာကတော့ မျှော်လင့်စရာပါပဲ။ အခုလောလောဆယ်အနေနဲ့တော့ 3.28 မှာဘာတွေများပြောင်းလဲလာလည်းဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သောရှာဖွေခြင်း : File Favoriting ထည့်လိုက်တဲ့ Nautilus ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အသုံးများတဲ့ file တွေနဲ့ folder တွေကို ရှာဖွေရတာ Nautilus 3.28 မှာပိုပြီးလွယ်ကူသွားပါတယ်။ “Files” တစ်ဖြစ်လည်း File Manager မှာဆိုရင်တော့ system ထဲက file တွေ […]
Tagged download, Linux, ubuntu	Discover
Explaing Special Linux Permission (SUID,SGID ,Sticky Bit) အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ special linux permission တွေ ဖြစ်တဲ့ suid, sgid နှင့် sticky bitတို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲတာတွေ မပြောခင်မှာ အခြေခံ permission သုံးခုအကြောင်းကို သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲတာတွေကတော့ read,write , execute တို့ဖြစ်ပါတယ်။ permission ပေးနိုင်တဲ့ file နှင့် directories တွေ ကတော့ user(owner),other,group ဆိုပြီးတော့owner types သုံးမျိုးနှင့်လာပါတယ်။ chmod ဆိုတဲ့ command ကိုအသုံးပြုပြီး permission တွေ ပြောင်း လဲ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ SUID (Super […]
11/04/2018 11/04/2018 yehbonemyat
The Secret Command To Reset Ubuntu Desktop to Default Settings Ubuntu Desktop ကို Default Setting ကို reset လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ command တစ်ကြောင်း အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ် ၎င်း command က unity နဲ့ GNOME Shell နှစ် ခုလုံးအတွက် ubuntu 17.04 နဲ့ နောက်ပိုင်း version တွေ မှာ ဘဲ အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် မိမိရဲ့ စက်ကို reset ချရတဲ့ အကြောင်းပြချက်က အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ဥပမာ ကိုယ် မသုံး ဖူးတဲ့ Desktop environments ကို ပြောင်းပြီး အဆင်မပြေ […]
Linux မှာရှိတဲ့ file တွေ directories တွေကို ACL(Access Control Lists)ကိုအသုံးပြုပြီး secure ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ပုံမှန်သုံးနေကျ read,write,execute permission တွေကို chmod, chown နဲ့တွဲသုံးတာက အလုပ်တော့ဖြစ်ပေမဲ့ file တစ်ခုထဲကို user အများကြီးအတွက် Permission တွေပေးချင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေနဲ့အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ acl ကတော့ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ acl ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ packages တွေကို sudo apt-get install nfs4-acl-tools acl ဆိုပြီးအရင် install လုပ်ပေးရပါမယ်။ acl မှာ default acl နဲ့ access acl ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။Default acl ကတော့ directory level မှာပဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ default acl […]
Tagged Linux Admin, Security, ubuntu	Discover
Linux မှာ swap partition ကိုဘယ်လောက်ထားသင့်သလဲ? Swap partition ရဲ့ size က ဘယ်လောက်ရှိသင့်သလဲ။ RAM ရဲ့ နှစ်ဆထားရမယ်ဆိုတာရော ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ RAM အများကြီးရှိတဲ့စက်တွေမှာဆိုရင်ရော swap ကလိုသေးလား။ အပေါ်ကမေးခွန်းတွေကတော့ linux os တစ်ခုကို install လုပ်ရာမှာ မေးလေ့မေးထရှိတဲ့ common questions တွေဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ swap size ကို RAM ရဲ့ နှစ်ဆထားရမယ်ဆိုပြီးရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ rule ကအခုခတ် computer တွေနဲ့ဆိုရင် လုံးဝကိုမအပ်စပ်တော့သလိုဖြစ်သွားပါပြီ။ အခုဆို computer တွေမှာ RAM က 128 GB ထိရှိလာပါပြီ။ အဲ့လိုမျိုး နှစ်ဆထားရမယ်သာဆိုရင် RAM […]
Tagged guide, Linux, ubuntu	Discover
03/03/2018 03/03/2018 yemin
Two-Factor Authentication အသုံးပြု၍ Ubuntu Linux လုံခြုံရေး ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။
ယနေ့ခေတ်မှာ သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေး ( Information Security ) သည် အလွန်အရေးကြီးသည့်အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်။ ထို့အတူ ဟက်ကာတွေနဲ့ Security ဂုရုကြီးတွေလဲ နေ့စဉ်အမြဲ အားပြိုင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ ကျန်တော်တို့လို ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လဲ ကျန်တော်တို့ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဟက်ကာတွေ လွယ်လင့်တကူ မရရှိနိုင်အောင် တတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ ကာကွယ်ထားသင့်ပါတယ်။ Two-Factor Authentication (2FA) လို့ခေါ်တဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ 2FA သည် အသုံးပြုသူ၏ username, password အပြင် အသုံးပြုသူ၏ ဖုန်းထံသို့ ပေးပိုမည့် verification code တို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဟက်ကာမှ password သိသွားသော်လည်း verification code ကို ရရှိရန်မလွယ်ကူနိုင်ပါ။ Ubuntu Server နှင့် Ubuntu Desktop နှစ်မျိုးလုံးအတွက် […]
Tagged Linux, Security, ubuntu	Discover
Guide Knowledge Tutorials
12/02/2018 kokoye2007 
Ubuntu users တွေအတွက် Terminal သုံးတဲ့အခါမှာ အချိန် ကုန်သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။ terminal မှာ alias သုံးနည်းလေးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ် ရေးနေကြ command အရှည်ကြီးတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မရိုက်ချင်လျှင် alias cmd လေးနဲ့ ချုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ သင့်ရဲ့ ubuntu os ကို update သို့မဟုတ် upgrade လုပ်ချင်လျှင် sudo apt-get update;sudo apt-get upgrade;sudo apt-get dist-upgrade ဆိုပြီး အရှည် ကြီးရိုက်ရပါမယ်။ အဲလို မရိုက်ဘဲ alias ကိုသုံးပြီး တိုအောင်လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ alias update=’sudo apt-get update;sudo apt-get upgrade;sudo apt-get dist-upgrade’ အပေါ်က […]
Tagged Alias, Bash, CMD, Command, Linux, ubuntu	Discover